Xiisad colaadeed oo caawa ka taagan Guriceel - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Xiisad colaadeed oo caawa ka taagan Guriceel
Xiisad colaadeed ayaa ka taagan Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ka dib markii halkaasi dhawaan ay qabsadeen ciidanka Ahlusunna, islamarkaana ciidanka dowladda dhexe iyo kuwo maamulka Galmudug ay bilaabeen dadaallo ay dib ugu qabsanayaan.
Saacaddihii lasoo dhaafay ayaa la sheegay in tiradii ugu badneyd oo dad ah ay ka barakaceen magaalada, islamarkaana hadda ay ka jirto dhaqdhaqaaq ciidan.
Mas’uuliyiinta Ahlusunna ayaa caddeeyay in ay doonayaan in aysan ka bixin magaalada ayna ku dagaallami doonaan haddii ay soo weeraraan ciidanka maamulka Galmudug.
Qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka ayaa ku guuldareystay dadaallo ay waddeen Saacaddihii lasoo dhaafay.
Ciidanka maamulka Galmudug iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa la sheegay in saldhigyo ay ka sameysteen inta u dhaxeysa Guriceel iyo Ceeldheere.
Previous articleTababar loo furay Saraakiil sugeysa Amniga doorashooyinka
Next articleSoomaaliya iyo Bankiga Adduunka oo ka wadahadlay horumarinta kaabayaasha dhismaha